'श्री ६ विद्याभण्डारी, श्री ५ केपी ओली र श्री ३ प्रचण्ड बन्दै' - satkar post
‘श्री ६ विद्याभण्डारी, श्री ५ केपी ओली र श्री ३ प्रचण्ड बन्दै’
पोखरा : कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनको चु’नावी आ’म स’भालाई सम्बाे’धन गर्दै नेपाली का‌ंग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन कुमार थापाले कानून बनाएर सरकार निरं’कुश बन्न थालेकाे बताएका छन् । पोखरा ८ सिमलचौरको चुना’वीसभालाई स’म्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता थापाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानून बनाएरै निरं’कुश बन्न थालेकाे बताएका हुन् । कास्की २ को उपनिर्वाचन कार्यक्रमलाई स’म्बोधन गर्दै नेता थापाले सरकारले वाक स्वत’न्त्रता हनन् गर्ने गरी कानून संसदबाट पा’स गर्न लागेको भन्दै यस्ताे कुरा बताएका हुन् ।
नेता थापाले यसरी सरकार निरं’कुश बन्दै जान थालेकाे आ’रोप लगाए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीबारेमा सामाजिक स’ञ्जालमा लेखेकै भरमा प्रहरीले स’माउने र जे’ल हा’ल्नेसम्मको कानून सरकारले ल्याउन लागेको उनले आ’रोप लगाए। युवा नेता थापाले भने, ‘सरकारले देशमा जो मान्छेले श्री ६ विद्याभण्डारीकी जय, श्री ५ केपी ओलीकी जय, श्री ३ प्रचण्डकी जय भन्ने छन् उनीहरुमात्र जे’ल जान नपर्ने कानून ल्याउँदैछ’, उनले भने, ‘खराब कार्यको जसले विरो’ध गर्ने छ ऊ जे’ल जानुपर्ने गरी का’नून बनाउन लागेको छ।’ सरकारले का’नून बनाएर निरं’कुशतातर्फ जान लागेको उनले अरो’प लगाएका हुन् । ‘राजा ज्ञानेन्द्रले कानून मि’चेर नि’रंकुशता ला’देका थिए। फरक म’त राख्न पाउनकै लागि ज्ञानेन्द्रविरु’द्ध आ’न्दोलन गरेर गणत’न्त्र ल्याएको हो’, उनले भने ।
मंसिर १४ गते हुने कास्कीकाे उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसका सबै शी’र्ष नेता तथा कार्यकर्ता पाेखरा पुगेका छन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनको चु’नाव प्र’चारको क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेता पोखरा पुगेका हुन्। पोखरामा शुक्रबार सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, रामशरण महत, शेखर कोइराला, डा. मिलेन्द्र रिजाललगायत शी’र्ष नेता भो’ट मा’ग्दै पोखराको चि’प्लेढुंगाबाट न्युरोड हुँदै पृथ्वीचोकसम्म पुगे। शी’र्ष नेताको सहभागितामा विभिन्न पाँच ठाउँमा को’णसभा भएको थियो । सभापति देउवाले सरकारले नागरिकको अधिकार खो’सेर प्रजातन्त्रलाई नै क’जोर बनाउन लागेको आ’रोप लगाए।
शुक्रबार साँझ पोखराको पृथ्वीचोकमा र्‍या’लीपछि आयोजित को’णसभामा कांग्रेसका शी’र्ष नेताको सहभागीता रहे पनि नेता डा. मिलेन्द्र रिजाल र कास्की क्षेत्र नम्बर २ का कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेलले मात्र स’म्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा शी’र्ष नेताहरुले एक’ताको स’न्देश दिने एकै ठाउँमा उ’भिएर चु’नावीसभामा सहभागीलाई अभि’वादन गरेका थिए। उपनिर्वा’चनमा नेकपाबाट विद्या भट्टराई चुनवी मैदानमा छन् भने साझाबाट रजनी केसी उम्मेदवार उठेकी छिन् ।